Ukuthandwa kuqala ukunyamalala kwi-Instagram kumazwe amaninzi | Izidalwa ezikwi-Intanethi
I-Instagram iqala ukususa ikhawuntari "efana" neeakhawunti ezingaphezulu
Besisele sazi iiveki ezimbalwa ezidlulileyo ukuba I-Instagram inenjongo yokususa ukuthanda kubasebenzisi. Kwaye ngoku siyazi ukuba uqala ukubasusa kwiiakhawunti kwiindawo ezininzi zehlabathi.
Yonke le nto iqale njengovavanyo eCanada naseIreland, kodwa kubonakala ngathi yile nto Iya isomelela ngokurhoxiswa kokuthandwayo kwiiakhawunti zomsebenzisi ezivela kwezinye iinxalenye zeplanethi. Siza kubona ukuba eli nyathelo linefuthe ekuthandeni kwenethiwekhi yoluntu kwaye kufanelekile.
Kwaye isizathu sinento yokwenza nokukhathazeka kunye i-neuroticism ekhuthaza ulwazi ukuba iiposti zethu zithanda izinto ezininzi. Oko kukuthi, inxulumene nesayikholoji yomntu kunye nendlela ezichaphazela ngayo izigidi zabantu kwihlabathi liphela ukuba iimpapasho zabo zifumana ukuthanda okuninzi.
Oko kukuthi, umbono ngulo Ukucinezeleka kwamava e-Instagram kwaye siyazikhuthaza ngenxa yezinye izizathu; Ngoku masithembe ukuba ngokususa olo xinzelelo, iliwa liyakuphumla kwaye liqale ukudlulela phambili lingene kwinethiwekhi yoluntu. Oku kubonakala kuyinto entle kodwa.
Ingxelo iyafumaneka I-Instagram yamagcisa adumileyo kunye nabaphembeleli abo banika uluvo lwabo kunye namava okungabinayo ikhawuntari yokuthanda. Kuya kufuneka sibabone ukuba bayakulinganisa njani ukubandakanyeka, kwaye yonke into ibonakala ngathi iya kuba ngamagqabantshintshi, kuba isenokungakhathali into yokuba unamawaka ezinto ozithandayo, ukuba kamva abantu abaphenduli kwaye bakukhuthaze ukupapashwa.
Ewe ewe kunokwenzeka ukuba olu tshintsho lufikelele nakuFacebook kwaye masibone utshintsho kwindlela yokubala ukuthandwa, nangona kusoloko kukho amaxesha ekwabelwana ngawo kwaye esi siqhelo sisalathiso somgangatho wopapasho olunikiweyo. Ungaphoswa yindlela yokusebenzisa iifonti kunye Iileta ezahlukeneyo kwi-Instagram.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » I-Instagram iqala ukususa ikhawuntari "efana" neeakhawunti ezingaphezulu
UTerry O'Neill usishiya eneminyaka engama-81 kunye nalowo wayefota abantu abadumileyo abangama-60
Ungaphoswa yenye yeAdobe MAX 2019 Sneaks echaza ezona mpawu zibalaseleyo zeAdobe CC